Nyika Yezvinyorwa Zvekushambadzira 2014 | Martech Zone
Wakambozvibvunza here kuti ndevamwe vashambadzi veadhijitari vari kuita kana zvasvika kune ekushambadzira marongero, kusanganisira blogging, kugadzira, kugovana, uye kuyera? Pamwe na Tarisa Bhuku HQ, Oracle Eloqua yakaratidza sei vatengesi veadhijitari vari kupindura kune zvinodiwa nemazano ehunhu mune ino infographic.
Isu takatsvaga kuenzanisa kushambadzira zvemukati nekunzwisisa kwakanangana nemawaniro, evaridzi, uye akabhadharwa matepu enhau- ndeapi marongero evatengesi ari kutevedzera - pamwe nekuti zvemukati zvakarongedzwa parwendo rwevatengi, uye akakosha mashandiro emametro ayo akakosha.
Yakazara Zvemukati Kushambadzira Benchmark mushumo inosanganisira mhinduro kubva kune vanopfuura 200 vatengesi pamibvunzo yakaita seiyi:
Ndedzipi mhando dzezvinoenderana nevashambadzi vemazuva ano vari kugadzira, sei kazhinji uye nezve zvinangwa.
Vashandisi vemazuva ano vanoshandisa sei zvimwe zvevamwe vanhu.
Ndeapi matambudziko akakosha anotarisana neazvino kushambadzira zvemukati.
Vashambadzi vemazuva ano vakanyatsoenderana sei nerwendo rwevatengi.
Ndeapi metric evatengesi vemazuva ano anotora uye nemabatiro avanoongorora zvemukati kushambadzira kushanda.
Iwo makuru maitiro anokanganisa zvemukati zvekushambadzira zviitiko.
Tags: 2014Blogginggwaro rekushambadzira zvemukatikugadzirwa kwemukaticontent strategieskubatanidzwa bloggingeloquainfographicbhuku rekutarisa hqkuongorora kwekushambadzirapangatauraOracle eloquamamiriro ekushambadzira zvemukati